Apple TV + inoramba ichiwana zvibvumirano zvinopa pekutanga sarudzo | Ndinobva mac
Kubva kuvhurwa kweApple TV +, munaKurume 2019, Apple yanga ichishanda kwenguva yakati kuti isvike kubvumirana zvibvumirano nenhamba huru yevatungamiriri, vanyori vezvinyorwa, vatambi, vagadziri… Isu takaona mimwe michero yekudyidzana uku paApple TV + chiitiko chekuratidzira.
Zviripachena, Apple haigone kuzorora pane yayo laurels uye inoramba ichitaurirana zvakasiyana sarudzo dzekutanga zvibvumirano ine huwandu hukuru hwemakambani ekugadzira. Yekupedzisira yaakasvika, sekureva kwaMugumo, anaSiân Heder, muratidziri wenhevedzano yatovepo paApple TV + Little amonia uye kuti akabatanawo mufirimu CODA.
Siân Heder asvika Chibvumirano chekutanga pakusarudza zvese zvemukati zvaunogadzira, zvekuti Apple ichagara iine yekutanga sarudzo yekutenga zvese zvirimo izvozvi mukuvandudzika pamwe nemangwana mapurojekiti anoshanda Heder, kungave semugadziri, munyori wezvekunyora kana showrunner.
Musoro unotevera une chekuita nemusikana uyu, munyori uye munyori firimu CODA, firimu ine kodzero yeApple kuyakawanikwa kutanga kwegore rino kuSundance Film Festival. CODA yakanyorwa uye inotungamirwa naSiân Heder uye ichatanga kuratidzwa munaAugust 13 paApple TV +. Parizvino, Apple haisati yatiratidza chero tirera yeiyi bhaisikopo.
Little amonia, iyo imwe nhevedzano iyo Siân Heder inoenderana, yakavandudzwa kwemwaka wechipiri, kunyangwe panguva ino pasina zuva rakarongerwa kuratidzwa kwayo. Muchokwadi, zvinoita sekunge kurekodha kwemwaka uno wechipiri hakusati kwatanga.
Heder akamboshanda pamwe dzakabudirira nhevedzano senge Nzira yaHulu, Orange ndiye New Black yeNetflix uye pane firimu Tallulah, yake yekutanga firimu firimu iyo yakatanga muna 2016.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple TV + inoramba ichiwana zvibvumirano izvo zvinopa iyo pekutanga sarudzo
Apple ichakurumidza kuvhura beta yekutanga yeiyo firmware yeAirPods Pro